Xiddiga Arsenal ee Matteo Guendouzi oo tijaabada caafimaad u maray Kooxda… – Gool FM
Xiddiga Arsenal ee Matteo Guendouzi oo tijaabada caafimaad u maray Kooxda…
(London) 05 Okt 2020. Laacibka khadka dhexe ee Arsenal, Matteo Guendouzi ayaa ku sugan dalka Jarmalka, waxaana uu saakay tijaabada caafimaad u maray kooxda Hertha Berlin oo uu ugu biirayo heshiis amaah ah.
Xiddigan 21-sano jirka ah ayaan ahaa mid aan ku jirin qorshaha macallin Mikel Arteta, wuxuuna u baahday inuu koox cusub raadsado, kaddib markii uusan wax saameyn ah ku yeelan Gunners tan iyo markii uu kaga soo dhaqaaqay Lorient sanadkii 2018-kii, markaasoo ay ku soo qaateen 8 milyan oo gini.
Lucas Torreira ayaa sidoo kale tijaabada caafimaad u maray kooxda Atletico Madrid ee dalka Spain dhowaan, waxaana uu sugayaa in kooxda ka dhisan caasimadda ay ku dhawaaqdo heshiiskiisa.
Waxa uu noqon karaan heshiis amaah ah qandaraaska uu Lucas Torreira ugu biirayo Atletico, iyadoo sidoo kale lagu dari karo in qiyaar loo siiyo in si toos ah loogu wada iibsan karo 22 milyan oo gini.
Si kastaba ha noqotee Matteo Guendouzi ayaa dhankiisa la filayaa in saacadaha soo aaddan ee maanta si toos ah loogu dhawaaqo heshiiska uu ugu wareegay kooxda Hertha Berlin.
Koeman oo ammaan kala dul dhacay Coutinho, Muxuuse ka yiri barbardhicii ay la galeen Seville??
RASMI: Inter Milan oo dhammaystirtay saxiixa xiddigii hore ee Man United, Matteo Darmian